Dhaqamadaan guurka yaab inta dhaafeen ayaad la argagaxi doontaa qaarkoodna qosolka ayay kaa dhameyn doonaan. | Filimside
Filimside waxay markasta u taagantahay in akhristayaasheeda dhacdo kasta ka haqab tirto sidaas owgeed waxaan halkaan kusoo gudbin doonaa qaar kamid ah dhaqamada ugu yaabka badan ee dadyowga aduunka guudkiisa saaran sameeyaan.
1-Meelo kamid ah shiinaha waxaa dhaqan u ah in wiilka iyo gabadha eheladooda marka hore kulmaan iyadoo arooska iyo aroosada is arkin, hadii labada ehel isku waafaqaan waxay ehelka gabadha sameynayaan gabadhooda ayay diyaarinayaan weyna u labisayaan iyagoona kadib ku ridaayo sanduuq weyn kaasoo ay kor uga qufulayaan.
Kadib ehelka ayaa sanduuqa gabadha ku jirto soo qaadayo waxayna u keenayaan ehelka wiilka ka dhashay iyagoona arooska ku wareejinaayo furaha sanduuqa wuxuuna wiilka noqonayaa qofka ugu horeeyo ee gabadha arkaayo.
Hadii wiilka gabdha cajabiso arooska isla meesha ayuu ka dhacayaa hadii ay cajabin weysana ehelkeeda ayaa dib loogu celinayaa.
2-Caadooyinka wadanka Guena waxaa kamid ah in gabadha iyadoo qaawan barkad biyo ah la dhex galinaayo dhalintana wey usoo daawasho tagayaan.
Wiilkii gabadhaas ka helo wuxuu usoo taagayaa gobol maro ah oo astaan u ah inuu gabadhaas ka helay hadii ay gobolkaas marada ka qaadato oo ay ku labisato isla goobtaas ayay xaaskiisa ku noqoneysaa.
3-Wadanka Malawi wiilka iyo gabadha inta aysan is guursan kahor waxaa lawada dajinayaa hal guri iyagoona ku noolaan doonaan mudo 2 sano ah mana is taaban karaan mudadaas.
2 sano kadib hadii gabadha ay ka heli waayso wiilka dabeecadiisa guriga ayay kasoo burineysaa.
4-Mid kamid ah qabiilooyinka hindiya waxaa caado u ah in gabadha ay guur guurasho bilowdo iyadoo wiilkana uu daawanayo waxayna ku guur guuraneysaa gacmaheeda iyo jilbaheeda.
Gabadhaas guur guurashada ma joojineyso ilaa uu wiilka uga barakeeyo.
Barakeyntaas ayaa waxay tahay inuu lugtiisa madaxa u saaro markaas ayay guur guurashada joojineysaa xaaskiisana noqoneysaa.
5-Mid kamid ah qabiilooyinka afrika daga waxaa caado u ah in Arooska uu aroosada timaha kasoo jiido.
Wuxuu ugu tagayaa gurigeeda asigoona madaxa iyo timaha isku soo qabanaya wuuna soo jiidayaa ilaa uu keeno goobta xaflada arooska ka dhacaayo.
6-Jaziiradaha Hawai ku yaalo mid kamid ah dadka dagan waxaa caado u ah in gabadha meherkeeda laga dhigo dooli .
Tirade dooliyaasha uu meher uga dhigaayo arooska aroosada waxay ku xirantahay quruxda gabadha.
Taas micnaheeda wuxuu yahay markasta oo gabadha qurux badantahay markasta oo dooliga la badinaayo.
La soco qeybta 2aad oo xiiso leh
Previous articleMiyay Deepika Padukone Iska Diiday Filimkan Uu Hogaamiye Ka Yahay Aktarka Amir Khan
Next articleDhaqamadaan guurka yaab inta dhaafeen ayaad la argagaxi doontaa qaarkoodna qosolka ayay kaa dhameyn doonaan. Qeybtii 2aad.